स्लॉट आज संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन जुआ ढाँचा टाढा टाढा टाढा छन्, त्यहाँ यसको बारेमा कुनै शङ्का छैन। धेरै जुवा प्लेटफार्महरू जुन त्यस्ता सामानहरू र गेमप्लेमा फरक फरक प्रकारको हुन्छन् जुन स्फोटले अझ बढी पारंपरिक अनलाइन क्यासिनो गेमहरू छायामा राख्छन्। यस्तो प्रकारको साथ रचनात्मकता को एक सही फट आउँछ, जुन निश्चित रूप देखि मा देखिन्छ Microgamingको नवीनतम स्लॉट, प्रधान सम्पत्ति.
यसको यसको प्रचारमा आगमन, एक अनलाइन स्लट रिलीज को रूपमा प्रधान सम्पत्ति बेवास्ता गर्न असम्भव भएको छ। यो मुद्दा हो कि, हामी यो खेल को ठूलो जान्छ वा बस्ट जान्छ कि यो कहाँ सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर हेर्न निर्णय गरे।
Keyhole मार्फत हेर्दै
प्राइम सम्पत्ति एक रंगीन र जीवंत अनलाइन स्लट खेलको एक प्रमुख उदाहरण हो, जसले यसलाई कम्तीमा भन्नको लागी धेरै आकर्षक बनाउँछ। यो खेलको विषय रियल स्टेट हो, यदि नामले पहिले नै त्यो दिइएन। तपाईं डिजाइन को बीच रीयल एस्टेट को सबै प्रकार को संदर्भ हेर्नुहोसगे, किनकि प्रतीकहरु को रूप मा रिल्स मा विभिन्न घरहरु छन्। रिल्स को ढाँचा पनि एक घर हो, जुन निश्चित रूप देखि मामलाहरु को कम्पाउंड गर्न को लागी काम गर्दछ, जब तपाईं यहां पृष्ठभूमि मा एक अद्भुत कट हरियो लॉन देख्न को रूप मा सम्पत्ति को रखरखाव को रूप मा देख सकते हो।
यो कसले जस्तै एक घर मा रहनेछ?
त्यहाँ सामान्यतया जेड, क्यू, र के के प्रतीकहरू प्रिम गुणमा प्रदर्शित गरिएका प्रतीकहरू छैनन्। बरु, घरहरूको गुच्छा हो जुन तपाईं रिल्समा हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले एक परिवारको खेतीबाट दुई-अर्का विभाजनबाट सबै चीजहरू देख्नुहुनेछ, र एक अत्यन्त अपमानजनक प्रवेश द्वारको साथ एक हवेली तपाई सधैँ हेर्न सक्नु हुन्छ। त्यहाँ पनि सम्पत्ति एजेन्सीहरूको सम्पूर्ण कास्ट पनि समावेश गरिएको छ, केहि धेरै अतिरक्त मुस्कानले राम्रो उपायको लागि समावेश गर्दछ।
अज्ञात बंगाल टाइगर
प्रमुख सम्पत्ति अपडेट गरिएको: जनवरी 31, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 प्रमुख सम्पत्ति
2.0.0.1 स्पिन र जीत
2.0.0.2 अज्ञात बंगाल टाइगर
2.0.0.5 Nrvna - nxt अनुभव
2.0.0.6 शक्तिशाली एटलस
2.0.0.7 जंगली पश्चिम
2.0.0.8 भूत सवार स्लॉट